नवराज बिक लाई जलाउन लग्दा, बाटो मै ढले आमा र बहिनीहरु, (पुरा भिडियो सहित) – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/नवराज बिक लाई जलाउन लग्दा, बाटो मै ढले आमा र बहिनीहरु, (पुरा भिडियो सहित)
पोखरा । ४५ दिन अगाडी गोर्खाका अमृत थापा मगर बेपत्ता भए । चैतको २८ गते हराएका उनी ४५ दिन पछि फेला परे । तर निधन भइसकेको अवस्थामा । उनी चिन्नै नसकिने अवस्थामा फेला परेका थिए । उनले चेन र कपडाका आधारमा परिवारले सनाखत गरेका हुन् । गण्डकी अस्पतालमा शव लगेर राखेको छ । उनी लामो समय पोखरामा बस्दै आएका थिए । माइक्रोवसमा सहायकको रुपमा काम गर्ने उनी ४५ दिन अघि साथीसंग माछामार्न भन्दै सेती नदिमा गएका थिए । उनी त्यतै बिलाए ।
४५ दिन सम्म खोज्दा बल्ल उनी फेला परे । उनको परिवारमा आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । उनको परिवारमा दिदी र बहिनी छन् । अमृतको शव फेला परेपछि उनको शरिर ढाक्ने प्लाष्टिक नभएपछि एकजना बहिनीले मुस्किलले त्यसको ब्यवस्था गरेकी थिइन् ।
एम्बुलेन्समा शव अस्पताल सम्म लैजाने भाडा नहुँदा पनि निकै अप्ठेरो भयो । भाडामा बस्दै आएका उनीहरुसंग शव ढाक्ने प्लाष्टिक नभएपछि त्यसको पैसा पनि मागेर तिर्नु परेको फुपुले बताएकी छन् । एम्बुलेन्सलाई दिने २५ सय पनि अरुवाटै उठाएको बताएका छन् । लकडाउनका कारण आर्थिक समस्यामा परेका उनीहरु छोराको शव अन्त्यष्टि गर्न र कात्रो किन्ने पैसा पनि सहयोग माग्नु परेको छ । उनीहरुले कात्रो किन्ने पैसा समेत नभएपछि उनीहरुले सहयोगको याचना गरेका छन् ।
तीन दिदी र एक बहिनी भएका अमृतको दिदीहरुको विवाह भइसकेको छ । एउटी बहिनीको ब्यवहार पनि उनले नै हेर्दै आएका थिए । बुवा आमा कोही नभएका उनीहरु आफ्नो पेट पाल्ने पैसा कमाउन गाडीमा हिड्ने गरेका थिए । आमावुवा गुमाएका उनी वहिनीलाई विदेश पठाउने योजनामा थिए । त्यसका लागि पनि उनले पैसा जोगाउने गरिरहेका थिए । आफ्नो एक्लो दाई गुमाएकी बहिनी वि’छिप्त भएकी छन् ।
उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । एउटै सहारा दाई गुमाएकी बहिनी ४५ दिन सम्म रोएर विताएकी छन् । निकै अप्ठेरोमा परेकी ति वहिनीलाई सहयोग जुटाउन अन्य स्थानियले पनि आग्रह गरेका छन् । बहिनीको भविष्य राम्रो बनाएर भोलीको दिन सुखदसंग विाताउने अमृतको चाहना बिचैमा टुटेको छ । उनको त्यस्तो अवस्था देखेपछि छिमेकीले केही सहयोग पनि गरेका छन् । तर ति वहिनीको जिवन भने निकै लामो छ । दाजु विनाको त्यो लामो जिवन अब उनले एक्लै विताउनु पर्ने छ
युवती र युवतीको भाई समेत आएर आफ्नो घरमा बसिसकेका कारण आफ्नो छोरा पनि दुई जना साथीलाई लिएर युवतीको घरमा जाँदा चैत महिनामा प्रहरी कहाँ बुझाएको आमाको भनाई छ । उनले आफुहरु आएर बस्न हुने तर मेरो छोरा जाँदा अपमान गरेर प्रहरीलाई बुझाए, त्यसैले म उनीहरुको विवाहको पक्षमा थिइन् । छोराले पनि त्यसरी साथी लिएर युवतीलाई लिन जाँदा आफुले थाहा नपाएको बताइन् । उनले अब आफनो एउटै इच्छा आफ्नो छोराको सन्तान चाहिने बताइन् । उनले ति युवती बुहारी बनेर आफ्नो घरमा आए आफुले स्वीकार गर्ने पनि बताइन् । त्यो आइ भने म राख्छु, मेरो छोराको माया हो , तर उ आफु आउन नचाहे पनि त्यो सन्तान राखिदेओस् । छोराको सन्तान मलाई चाहिन्छ उनले भनिन् ।
ललितपुर । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ललितपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।ललितपुरको बुङमति घर रहेका ५७ वर्षिय पुरुषको ज्यान गएको ललितपुरकी सांसद पम्फा भुषालले समेत जानकारी दिएकी छिन् ।
ललितपुरको किष्ट अस्पतालमा उपचाररत उनको बुधबार साँझ निधन भएको हो ।बुधबारै आएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ नै रहेको स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुरका प्रमुख डा. खगेश्वर गेलालले बताए ।
पम्पा भुसालले फेसबुकमा लेखेकाे स्टाटस
डा. गेलालका अनुसार, ११ गते अल्कोहलिक लिभर डिजिज भन्दै उनलाई पाटन अस्पताल लगिएको थियो । तर आईसीयू नभएको भन्दै किस्टमा रिफर गरिएको थियो । अस्पतालले १२ गते नै उनको थ्रोट स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाएको थियो ।उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । यद्यपि, कोरोनाका कारण मृत्यु भएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी छ ।
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिन समय माग गरेपछि संविधान संशोधन विधेयक बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन। सरकारले जारी गरेको मुलुकको नयाँ नक्सा, सीमाको रक्षा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विषयमा सिंगो मुुलुक एक ठाउँ रहेको सन्देश दिन दलहरूले संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संशोधन विधेयकप्रति सबै दल एकमत भएका थिए। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संशोधन विधेयक पारितकोे निर्णय गर्ने र त्यसबेलासम्म पर्खिदिन सत्ता पक्षसँग आग्रह गरेको थियो। सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकप्रति सकारात्मक देखिएका जनता समाजवादी पार्टीका नेताले भने आफ्ना माग पनि समेटेर संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
मुलुकको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले शुक्रबार संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयक दर्ता भएको ५ दिनपछि संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार संसद् सचिवालयले उक्त विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउन कार्यसूची तयार पारेको थियो। तर, दलहरूको आग्रहमा अन्तिम समयमा विधेयक रोकिएको सचिवालयले जनाएको छ।
‘सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दल सीमा अतिक्रमणको विरोधमा छन् र यो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्ने हिजोको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष हो,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिने कुरा सर्वदलीय बैठकमै भएको हो। कांग्रेसको बैठकलगत्तै विधेयक अघि बढ्छ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबारे कुनै छलफल नभएको र संशोधन विधेयकको एजेन्डा हटाइएकोबारे आफ्नो दललाई जानकारी नभएको बताए।
संशोधन विधेयकमा सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य दल एक ठाउँ उभिने अवस्था रहेको भन्दै खाँणले संशोधन विधेयक अघि नबढ्नुमा विपक्षी दललाई आरोपित गर्न खोज्नु भने निन्दनीय भएको बताए। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसअनुसारको निसान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्र्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयको संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
विधेयकप्रति सकारात्मक देखिएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिन समय मागेको थियो। उता, मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरूले विगतमा राख्दै आएका विषयलाई पनि समेटेर प्याकेजमा संशोधनको गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अन्य विषयमा संशोधन हुन नसक्ने जानकारी सर्वदलीय बैठकमा गराइसकेका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार नै बोलाएर संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा निर्णय गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।
‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक चाहिएको हो,’ थापाले भने, ‘भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौँ र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन पारित गराँै। भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सर्वदलीय बैठकमा सबै दलले विरोध जनाएका थिए। आफ्नो भूभागलाई संविधानअनुकूल बनाउने गरी आएको संशोधन विधेयकप्रति सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन जनाए पनि सल्लाह नगरी सरकारले एकलौटी विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
‘समग्रमा दलहरू एक ठाउँ उभिएका छन,’ नेम्बाङले भने, ‘कांग्रेसको बैठक बिहान बसे, दिउँसो अघि बढ्छ, दिउँसो बसे भोलिपल्ट संशोधन विधेयक संसद्को प्रक्रियामा जान्छ।’ सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकप्रति सकारात्मक जनता समाजवादीका नेता आफ्ना माग पनि समेटेर संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। ‘संविधान जारी हुँदैदेखि हामीले उठाउँदै आएका माग पनि समेटेर संविधान संशोधन गराँै भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ जनता समाजवादीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने। संसद्मा एक सिट मात्र रहेको राप्रपाले पनि संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। एकसिटे अन्य दल पनि संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिएका छन्।
बच्चा बोकेर रिक्सा चलाउने अर्जुनकी श्रीमती रुदै मिडियामा ( भिडियो सहित )
युट्युबरको टोलीले ममाथि दु’र्ब्यबहार गर्यो भन्दै , पुष्पा लाईभमा आइन (भिडियो)